Maxa ka Jira in Shirka Dhuusamareeb Door laga siin doono ‘Gobolada Waqooyi’ Maxayse ka dhigan tahay ? | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Friday, July 17th, 2020 | Posted by kalshaale
Maxa ka Jira in Shirka Dhuusamareeb Door laga siin doono ‘Gobolada Waqooyi’ Maxayse ka dhigan tahay ?
Muqdisho ( Kalshaale ) Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wafdiga u raacaya shirka berri ka furmaya Dhuusamareeb ku daray Raâ€™iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Guuleed, sida ay sheegayaan ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay.
Mahdi Guuleed oo kasoo jeeda gobollada Waqooyi ama Somaliland, ayaa madaxweynuhu uu ku doodayaa inuu shirka ku matalayo gobollada Waqooyi, maadaama uusan jirin maamul matalaya.
Waa Goâ€™aan taariikhi ah Hadii uu arintaasi qaato madaxwayne Farmaajo, Waana markii ugu horreysay oo matalaad noocan ah loo muujiyo Gobolada Waqooyi, Balse hadii arintan la diido wuxuu shirku Noqonayaa meel ay Siyaasiyiinta Koonfurta Soomaaliya ku sheekaysteen.
Shirka Dhuusamareeb ayaa waxaa jira dad dhaliilsan, waxaana kamid ah gudoomiyaha Gollaha shacabka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan oo sheegay inay maamulada Faragelin ku hayaan Arimihii Baarlmaanka iyo Shuruucdii doorashooyinka ee baarlamaanku Ansixiyey
Dhanka kale waxaa Dhuusonareeb ku sugan Guddoomiyaha Guddiga Madaxa Bannaan ee doorashooyinka Qaran Xaliima Yarey, Waxaa sidoo kale la filayaa inu uhalkaasi soo gaadho Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi oo ku sugan Garoowe,
Shirka ayaa u muuqda inuu noqon doono mid Balaadhan, waxayna taasi yaran doontaa saameynta madax goboleedyada, iyo in la helo garabyo taageersan marka la gaadho xilliga goâ€™aan qaadashada shirka.
Short URL: https://kalshaale.ca/?p=30054
Posted by kalshaale on Jul 17 2020. Filed under MAQAL IYO MUUQAAL, WARARKA, XULKA KALSHAALE. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry
41 Comments for “Maxa ka Jira in Shirka Dhuusamareeb Door laga siin doono ‘Gobolada Waqooyi’ Maxayse ka dhigan tahay ?”
July 17, 2020 - 9:34 pm
WAR BAAHINTA, Waxaan uga digeyna INAY Isticmaalaan Magaca Mudulood markay ka hadlaan siyaasadda Ayyagoo u nisbayna koox gooniya.â‰ˆÂ©â‰ˆMudullood wuxuu u kala baxaa; 1.Daarandoolle Mudulood >Abgaal Cusmaan Darandoole Mudulood. 2.Ciise Mudulood =Udeejeen 3.Xawaadle M/med Wiilki Daara Mudulood. Faahfaahin dheeraada Mudulood wuxuu dhalay 2ba wiil Darandolle iyo Ciise iyo Gabadh Daara. Ciise iyo Daara Waa isku Hooyyo. Â©Gabay uu nin M/xana tiriyey ku jirtay; GARACII XAWAADLIYO MIDKAY GABADHU AY KEENTAY Â°GEDII HIRAAB WAA QABAA GODOBTA DAAROODE Â°BAL MAXAA ANIGA GOONI IIGA DHIGAY GACALOY WAA YAABE? â‰ˆÂ©â‰ˆAAN teenni ku noqone Haddiiba ay saa tahay Thumma Thumma iyo Gabdha dhoofiye KUMA hadli karaan Magaca Mudulood TAASINA waxay sii caddaynaysa inaysan ku hadli karin Xitaa magaca Abgaal Sababtoo ah Magaca waxaa la wadaaga Siyaasiin aysan isku aragti AHAYN. WBT
July 17, 2020 - 9:40 pm
Farsamdaan waa farsamooyinkii Afweeyne uu isticmaali jirray isaga oo keeynayaya Isaaqa hadanna mid place holder ah, Mahan u yaal ah uu dhaho waxaad yahay wasiir hebel iyo maareeye hebel. Hadeer daanyeer Farmaajo markii uu lumiyay kalsoonida wabiilada Somaliyeed ee Koonfur intooda badan, waxuu us dhahay buugii kavaankii Afweeyne isticmaal, oo niman hooyadood wasooyin ah oo Isaaq ah, oo Xamar been been ugu nool [habeen iyo maalin walbana ku xirran Hargeeya] in uu dhaho, waa I taageersanyahiin, oo uu u ekeeysiiyo bareejo. Daanyeer. Waxaase ka daanyeersan mother fucker Shiiq Shariif iyo Ahmed Macallin Fiqi iyo nikaastii daanyeer Farmaajo nagu soo saaray. In fact, these mother fuckers waa in loo sheegaa in eey this shit, eey tahay masiibadda Rey keenen. In iyaga eey ka mas’uul yahiin wax walba oo uu sameeyo daanyeer Farmaajo. Waa isla xisaabtan.
July 17, 2020 - 9:46 pm
U a mother fucking asshole.
Thuma Walaahi, qofka waalan ee Somaliga iyo qofka doqonka ah in uusan caayeeynin qabiilka layirri waa tahay. Therefore, this asshole walaahi bilaahi in uusan Xawaadle aheeyn. Xataa hadii lagu qufulay isagga oo garac ah waa sidda uu dhahayee, maahan Xawaadle, in either case Xawaadle.
July 17, 2020 - 9:51 pm
ilaa waqtiguu AFHAYEENKA MUDULLOOD MR SANBALOOLSHE u digey shirka Galmudug
(Ma waxaad ku maqneyd NIN MAREEXAN AH ayaa WIIL MUDULLOOD WECEL ku sheegay).
Waa dhaqan xumadiina inaad adigoo 80 jir ah qabiil dhan ku sheegto WECEL.
(ADIGOO DHIBSADEY INUU SANBALOOLSHE ka digey – inuu Farmaajo yahey Gar ma qaate).
– Xawaadle Ifto ayuu yaqaan idinkuna Cey.
July 17, 2020 - 9:57 pm
Nin raga haddaad waxaad Wax ka dhihilaheyd inuu Farmaajo HADAL DHEER KU DHAHEY
(REER WAQOOYIGA KOOFUR JOOGO WAXAA WAKIILKA AH WIIL ISAAQ MR MAHDI)
Waqooyina DAL ISKUMA HEYSANO EE DAD AYAAN ISKU HEYSANA – Waana in naloo wada hadalsiiyo sidii labo wadan.
24 hours ayaad halkaan uga calaacali jirtey – XASSAN SHIIKH IRIRNIMO AYUU KHAATUMO ADMINISTRATION KU DIIDANYAHEY,
– Mareexaan ayaa WECEL DHAHEY,
CALI DHUUX AYAA GAMBO XIRTEY.
Waxaas waa IFTO nin Taag iyo Tabar waayey
July 17, 2020 - 10:05 pm
Hadda ka horna waxaad golahaan ka sheegtay. Gabadhii mudulood in ay wacal dhashay. Wacalkaasna xawaadle ahaa.
Raali gelin ayaad ka bixisay. Waa Markii labaad ood gefkaan kusoo celiso.
Waxaad sheegataa xawaadle hadaana waxaad leedahay xawaadle waa wacal.
Ninyahoow gabadhii muduloodna how gefin reerkaas xawaadlana how gefin.
Waxba kugu soo kordhin meyso in aad dadka lafa dhaanto..
Qof walbo awoodiisa ayuu hadlaa. In aad sida daciifnimada leh u hadasho kaliye wexey Cadeyn u tahay liidnimadaada.
Bal caqli ciyaalka kalshaale wuxuu bogan cinwaanka inooga dhigay fiiriya;
“Maxa ka Jira in Shirka Dhuusamareeb Door laga siin doono â€˜Gobolada Waqooyiâ€™ Maxayse ka dhigan tahay ?”kkkk
Dhinacayaga waxba! Waa khuraafaad-ka maafiyada Villada fadhidaa isku maaweeliyaa.
Ayayday AU ayaa hal hays u lahayd; Nin aan quus aqoon isagaa quusa.
kkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkk
July 17, 2020 - 10:07 pm
waa kaa odagii galabta xagu iska dhigay sheekadi hebel Muslim maahan waa kaas bilaabaya quraafad kale oo uu isleeyahay ina farmaajo ku difaac duli baa ku dhacay ee yaan waqti kaga lumin daanyer farmaajo
July 17, 2020 - 10:10 pm
waa nin meel iyo geed uu qabsado waayey ee yaan waqti kaga lumin daanyer kaan rafanaya
July 17, 2020 - 10:11 pm
Cadaado & Garqaad,
Odaygan Axmed waa asaasaq toobad seega. 100 jeer ayaan idiin sheegnay, idinkuun baa adeerkaa haya.
Waar saaqidkan xitaa magaciisa markaad qoraysaan ka saara Soomaali. U bixiya mag kale ama ha uba jawaabina munaafaqaan.
July 17, 2020 - 10:12 pm
wiil xeraale Thanxs sxb.
July 17, 2020 - 10:13 pm
Madaxweyne farmaajo. Wuxuu rabaa in uu shirka dhuusamareeb fashiliyo.
Dhib ma jiro.
Haduu Mahdi guleed soo kexeysto.
Kheyrana cabdi xaashi ayuu soo kexeysan.
July 17, 2020 - 10:17 pm
ASC Dabshid, Garqaad, Will Xeraaale iyo dhamaantiin.
Will Xeraale, brother, yes waa kaas odayga daanyeerka ah ee Ahmed Somali markale cadeeystay in uusan Xawaadle aheeyn. Laakiin he is an asshole lasoo barray system kii adeerkiis Afweeyne, oo waxuu u heeystaa Somalida maantay 2020 in eey kamid tahay Somalidii 1969kii. Hadii uu Afweeyne noolaan lahaa maantay sidaas eey u dhaqmayaan Farmaajo iyo daanyeer Ahmed Somali ayuu walaahi u dhaqmi lahaa.
Is bedelka, iyo critical examination, in wax loo fiiriyo si hoose waa ku adagtahay dadka maskaxdooda eey dhaqday daanyeernimadii kacaanka, waa brainwashed.
July 17, 2020 - 10:20 pm
Laalays, Bacda salaam,
Brother, wax yar ayeey igu qaadatay in aan ogaada daanyeerkaas Ahned Somali in uusan u qalmin title iyo cinwaanka adeernimo, mana aan ugu yeero anniga. Waxaan ugu years in uu yahay daanyeer mother fuccker ah oo Daarood ah laakiin is qarrinaya according marka loo eego ficilkiisa.
July 17, 2020 - 10:23 pm
Soomaalida Ninka Qaarandiidka wuxuu isku dayaa inuu Qaaranka CILADEEYO, ama uu soo kaxeysto Koox Qaarandiid ah.
Lkn sida dhaqanka Soomaaliyeed ah, waxaa la dhahaa WAA LAGAA DHIIBI EE RAASHINKAAN CUN, sheekadana Iska dhageyso.
Hadda Farmaajo haloo sheego – KORORSIGANA WAAN KA FAKAREYNAA adiguna Madaxweynahii ayaad tahaye shacabka Degmooyinka GALGADUUD soo salaan oo Caano soo cab.
Wixii Qudbaana Rasalwasaarahaada ayaa shirka ka sheegi, hadhowna Suulka halaga Saaro.
Waxaa kuxigidoono – According Dhuusamareeb.
XANJO inuu yahey SANBALOOLSHE ayaa noo sheegay.
Cinwaaka waa uu khaldan yahay. Ma iidoor qudhaa ayaa wax laga waydiinayaa woqooyiga Soomaaliya.
Sida saxda ah waxaa wax laga waydiinayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed.
Marka lagu laqdabeeyo Somalia hab beeleed dee waxaa dhumaya waddanimada Soomaaliyeed iyo astaanteeda qaran.
July 17, 2020 - 10:52 pm
Waxaa soo baxaayo warar shegaayo. Madaxweyne farmaajo in uu maamulada iyo kheyre oo wada joogo uu telfoon kula soo hadlay kana codsaday. In 2 sano loogu daro.
Maxaad nagu dhaantaa warkaas
July 17, 2020 - 11:00 pm
walahi marar badan baan aqriyey comments kala duwan oo aad soo qortay sxb waxa tahay nin wax badan fahamsan oo uu San gaadi karin daanyer suuronaya oo geeda isku aadinaya waxa iiga sii daran xita isma oga sidu uleeyahay xawadle ayaan ahay buu kuleyahay xawadle waa wacal hadana duli ku bax
Inuu codsan shaki kuma jiro oo waliba waxaa soo farey MENTOR ABBY AHMED ABYSSINIA,
ayageyse u taala hadey ka yeelaan
Xamar waxey isu diyaarineysaa Doorasho
hadduu dhaho Mr Farmaajo labo sano kadib ayaan qaban doorasho Qof iyo Cod ah,
Jawaabtu waxaa waaye Film waxaan fiirsaney 1969, oo Siyaad Barre balan qaadey 1972 Doorasho qof iyo cod ah ayaan qaban.
– According Kampala
– According Dhuusamareeb
Waxaa ku xigto Doorasho ama EXILE
( Reer Qurac dambana Waa ka xaaran Xoriyo)
July 17, 2020 - 11:09 pm
Abiya Ahmed ayaa dhahaa anigaba waxaan ku darsadey Labo sano ee Halkaas Fadhi intaan
5tii dekedood la wareegahayo.
Xitaa ka filo inuu dhaho Ciidan iigu keen Xamar.
Mixnad ayey mar sedexaad Sacad noo keeneen.
July 17, 2020 - 11:20 pm
Wax kale iska daaye. Anigu waxaan ogahay. Haduu inta doorasho qabto noceey doonto ha noqotee uu soo laabto. In aan lakala amaan heleyn. Iskadaa In uu joogo isagoo sharci daraahe.
Ninkaani ma cafimaad qabo aniga aragti ahaan waxaana la taliyo kuwa isaga kasii liito oo naftiisa iyo naftooda been u shegaayo
Xalka kaliya ee banaan waa in uu meesha baneyaa.
Arintaan hadeey cadaato. Waa in loo diyaar garoobaa sidii dalka looga badbaadin lahaa qurba joogta xanaaqsan.
Waxaan la soconaa inay XAMAR joogaan siyaasiin badan oo reer Waqooyiya MARKA maxaa keenay in layiraah Mudane Mahdi Guuleed ayyaa Reer Waqooyi mathali? waaba xubin ka tirsan Dawladda Somaliye?.â‰ˆÂ©â‰ˆANIGA waxaa ila quman inay akhyaartaasi reer Waqooyiga meesha ka hadlaan ayyagoo ka dhawsana siyaasadda maanta taagan BALSE xusaan Taariikhda Somali iyo midnimadi siday ku timid.
â‰ˆÂ©â‰ˆDabshidow bal arrintaa weydi wuxuu ka qabo Garqaad Hadduusan dhanki kale jirin.
ARKAY hadaaqi; Wiil Xeraale, Cadaado, Garqaad iyo ciyaal suuq Dabshid. WBT
July 17, 2020 - 11:50 pm
@Garqaad Dabshid,iyo dhamaan waan idin salaamayaa.
@Axmed Somali waa iga talo aragtidaada si ka fiican sidaan wax u dhiibo.Beelo lacaayo was qalad.
Dhammaantii qof kastaa xaq buu u leedahay in fakarkiisa uu dhiibto,qofna xaq uma lahan in uu beelo caayo.
WAR IS KARAAMEEYA CARADIINA XAKAMEEYA.
Aniga waxay ila tahay.Somalida isma fahmi doonaan,waxaana soo dhexgali doona gaalada noo taliso kuwaas waxay sheegaan ayaa ka soconaaya meesha.
30million ayaa howshaan ku baxday absolutely doorasho waa in ay dhacdaa xukunkana loogu kala wareegaa sidii Xasan Sheekh.
Caqliga ha shaqeeyo cayda iska yareeya,cay waxba ma keenayso credibility qofkana wey dilee
Waa sidaas doorasho iyo xil wareejin degan oo Nabad ah, ayaa dalkaan iyo dadkaan u dan ah.
Bal Cidda hoos ha isu wareysato,
Anigu waxaan ogaa waqtigii Yuulka ay soo kaarikeeyen Reer Bari. Sade ayaa Furdaamiyey waliba
Xassan Macallin iyo Garjab.
Doorasho lee hala fahamsiiyo Mr Farmaajo
* Idil Cabdullaahi Farmaajo ayaa nooga digtey 4 sano kahor, ee anagaa lahey FARMAAJO IIGEEYA, XAAWALEY iga daaye.
Mise Garjeex ayuu ahaa
July 18, 2020 - 12:20 am
War golihii kalshaale waa waashay asluubtii iyo dhaqankiina waa ka tagay waxay mareysaa in xurmadle oday axmed somali si bareer ah qabyaalad cad loogu weeraro waxaana lagu heystaa fikirkiisa uu cabiray war waxaani waa gunnimo ee odayga u kala hara oo dadnimada ha ka taginina midda labaad waad ogtihiin in xurmadle oday axmed somali ilaahay ka koriyay qabyaalad iyo kala qeybin umada soomaaliyeed markastana uu ku adimo midnimada iyo adkeynta dawladnimada soomaaliyeed tan kale dhaqan iyo dadnimo maahan in Hal quf aad iska wada laadlaadisaan idinkoo beel ah bal fiiri Dabshid,Garqaad,cadaado,wiilxeraale iwm .war xishooda oo wax Iskula hara maradaa idinka dhacdaye.oday axmed somali xagiina waa dhaxag taabasho iyo tuujin waa iskaga mid.waana difaaceynaa xurmadle axmed somali sababtoo ah xaq ayuu ku taagan yahay. Rumaan la sheegin maahine,rati dameer ka raad qurxoon.
July 18, 2020 - 12:42 am
Xaawadle wacel waaye miyaa MIDNIMO SOOMAALIYEED ah ood KU GOODIN WAAN KU TAAGEERAYNAA.
July 18, 2020 - 1:02 am
CID WALBA WAA IN DAWR LA SIIYAA WAA DAWLAD KU DHISAN FEDERAL TRIBAL STATES OF SOMALIA
,NO NATION ON EARTH HAS EVER HAD THIS KIND OF GOVERNMENT, WAA LABO AAN IS QAADAN DAWLAD IYO QABAA’IL..
July 18, 2020 - 2:20 am
Dabshidow, maxaa waalay, sebiga Cadaado, Sheegatada Wiil Xeraale iyo 2ba miire Garqaad? CAAWA ka dib Waxaan qolyahaan ula baxay magacyo jadiida kuwaaso kala ah; Cadaado SEBI, Garqaad LABA MIIRE iyo Wiil Xeraale SHEEGATO.â‰ˆÂ©â‰ˆSomalijecel adeer, u fiirso abidkay Qabiil macaayin sababta oo ah Diinta iyo DÃ daan ii ogolayn MANA heleysid meel aan Qabiil ku caayay oo anigaba Qabiilkasta sheegta Mideeda kale munaafiqiinta Dabshid iyo Garqaad ayyaa yiraah SAASA TIRI ayyagoon eraygeeygi soo xambaari, adeer isaga kaa sheekaymaayo ee NIN MUSLIM AH BAAN AHAY. WBT
July 18, 2020 - 2:47 am
Baarqab adeer, waxaan ka xumahay inaan markaan geedkaan furayba aan qoraal xanjafeyna horay ka aaday ee haddaan marka hore akhrilahaa qoraalkaaga; Sebi, labamiire iyo Sheegato waxba kama qoreen. Waagi hore markaan qoraalkaaga oo kale arko waxaan dhihi jiray; “tolow maxaa lagaa sasaban?” haddase waxaan ku leeyahay MAHADSANID adeer runtaad u hiilise. WBT
July 18, 2020 - 5:31 am
Ninkii Garqaad ahaa dhib wayn ayaa haysaata.Guryihii ay dumiyeen ayuu Formaajo dib u dhisay.Magaaladii Xabaalaha noqtay ayuu xaadhxaadhay,Ciidankii Dacaska xidhan jirayna Diraysbuu u xidhay,lacagtii laga cunijirayna wuu siiyay.
Maxaad sidii Adeerkay Tuug u noqon wayday?
Maaha inaad ka fiicnaato Adeeraday Xasan sheekh iyo shariif axmed.
Dambi ayay kugu tahay.
Markaan darsay dooda Garqaad,sidaa ayay u egtahay.
Dee Garqaad maryaha ayuu dhigan rabaa.
Maxaad adeerkay uga shaqo fiicnaatay?
Maxaad ciiidan Maleeshiadahaa ee la caayi jiray uga dhigtay ciidan qaran?
waar bal dambiyadan uu Formaajo galay ee lagu haysto,ku dara dambiyada laysku colaadiyo.
Unukaa wax aragnay.
July 18, 2020 - 6:11 am
Farmaajo guryo nooma dhisin. Ee kuwii dhisnaa ayuu naga dumiyay .wadooyinkii ayuu Naga xiray.
Muxuu guri noo dhisaa isagaanba guriga kasoo bixine. Mar marbaad iska hadashaa.
Mr bahaloow. Waan ku dareemi karaa. Waxaa niyadda kaaga jirto armuu maalin borame yimadaa ee uu isaaq idinka dul qadaa.
Hadda waad arkeysaa xaalku meesha uu maraayo. Farmaajo talo farahiisa waa ka baxday. Wax uu sameeyo garan maayo. Ileen siyaasi rugcadaa ah Maaha. Aqoon uu wax ku kala xaliyo maafish. Hunguri kororsi ah waa ku jiraa.
Alla maxaa rag aan mudo asxaab aheyn war ka tegay.
Eeboow wadanka nimankii lahaa ayaa joogo.
Wadanka nimankii kaligii taliyihii ka saaray ayaa joogo.
Nimankii isaga u dhiibay ayaa joogo.
Hadda ragaas uu garqaad hogaanka u yahay ayaa imanaayo. Adigu tageerada iyo sacabku hakaa diyaarsanado.
Oromo ayaa yaabtay
July 18, 2020 - 7:25 am
Soo bood bood bara watanaa soo bood bood bara watanaa ani lee baraakadaa ani lee baraakadaada bukayn karaaye ani lee bukayn karaaye
July 18, 2020 - 8:05 am
Adeer axmed waan ku salaamay ,salaan ka dib waa laa shukri calal waajib in qufka laga gardaran yahay la garab istaago,kan gardarana Loo nasteexeeyo oo gacanta la qabto looma sheego qaladkiisa taasaa waxtar iyo hiillo ugu filan,in dadka wax lakala yiraahdana waa wax nagu waajib ah oo muslim baan u nahay,somali ahaana dhaqan baan u leenahay in dadka isqabta wax lakala yiraahdo qufkii dad iis-heysta aan wax kala oran ama waa nacas ama waa nacab.adeer axmed mahadsanid iska a cafi dhalaankaan,annagaa xaal kaa siinaye.
July 18, 2020 - 8:23 am
Akhyaarta Barxadda Waan idin salaamay Gedigiin, Jaallayaal markay joogto Aniga Bisadaha; Mugdi, Sebi iyo Laba Miirre Waxaan idinka codsana Inaad dariishadda naga fiirsataan Haddaysan idin casumin.â‰ˆÂ©â‰ˆJaallayaal ha ii baqina WAXAA igu maqan; 4jir ilaa 10jir geeleey,10jir ilaa 22jir kolejaale, 22ilaa 27iskaabolo meereesta MARKA ma jaaba-jaabadaan aan u daaha? weliba anoo kuraya ayyaa kii geela ila raacaba iska kay ulayjiray oon dhabarka jacijiray oo illintu iga daadajirtay. WAR Dabshidow la tali saaxiibadaa oo u sheeg inaan God-ku-haraa ahay SUG-SUG!!! LABA MIIRRE ka reeb isagu ma yara Hadduu QABTI ka hor Buqda Aqable geel Gugundhabe dhexjooge. DÃ uud iyo Buqda aqable sheeko weyn baa Halkaa ku jidha. â‰ˆÂ©â‰ˆAkhyaarta Barxadday Kuwaan inaan baqti jiido dhadhan ma lehe YAA KU HAGOOGTAY aan iska daaye?. WBT
July 18, 2020 - 8:41 am
Abiy Axmed maaha Oromo Xabashina maaha!
July 18, 2020 - 8:51 am
Baarqab adeer, Malaaigu haku salaanto. â‰ˆÂ©â‰ˆAdeer markaan wax qoraa WAA iska daaha Marmar Filim baanba fiirsadaa MARKA haddaan arkay qoraalkaaga MASLAXO ka talin Waana ku farxay Waana AQBALAY, adeer ILAAHEEN SWT haku dhowro Adduunyo iyo Aaqiraba. WBT
July 18, 2020 - 10:13 am
Hadalkaa Mr BaHaL jawaab uma haysid sxb ka bood. Waa run laba jibbaran iyo xaqiiq baarka firatay oo laafyoonaysa…
July 18, 2020 - 11:44 am
Farmaajo sedex Arimood ayaan u keenay Villa Xamar
1. In reer Qurac geedaha ka soo degaan oo ka haraan shisheeyaha
2. Inaan muujino inaan C/llaahi Yuusuf qabiil ahaan lagu Masaafurin, sidookalena iska reebno KAJANKII Kablalax ee ahaa – haddaad nin Daarood ah sharfeysaan – Ninkaan Hawiye ismoodey CAR U DHIIBA.
3. Tan ugu weyn oo aheyd, Xoolo laga Canshuuro maleh Tolkiis ee Bal inuu Si TOOS AH U HOOS KEENO VILLA XAMAR.
– AQRISTOW SEDEXDAAS QODOB kee lagu guuleystey
Only inaan QODOBKA 2AAD.
midka ugu horeeya (1) asagaaba ka sii darey
Oo Addiss Ababa iyo Eritrea- Xajkii moodey
Midka sedexaadna ileen nin Leader ah ayaa Tolkiis loo diraa. Ceeb la’aan inaan hadda ku furdaamino waaye
* Bur dhacey naga iibiyeen
July 18, 2020 - 2:16 pm
“Guusha Geesigu,waxay noqotaa guuldarada Nacaska”.
Anagu waxaan Aaadame,waxaan arkano ayaan ka hadlaynaa,kama hadlayno wax naga qarsoon.
Guryihii aad dumiseen 30 sano ka hor oo la dhisayo.
Garoonkii Ciyaaraha ee dhalinta somaliyeed ku ciyaarilayd oo 30 sano kadib dib loo dhisayo.
Waxaan arkaynaa gurigii Murtida iyo madaddaalada ee aad dumiseen,hadaan tihiin Mooryaan tii Usc iyo wixii taabcasanaa oo Formaajo dib u dhisayo.
waxaan arkaynaa meelihii taariikhda ahaa ee aad dumiseen ama aadba Statuegii qaadateen oo iibagayseen,oo dib loo dhisayo.
Waxaan arkayn ciidankii dacaska sitay oo Diraystay xidhan.
Waxaan arkaynaa ciidankii Bilaa lacagta ahaan jiray oo bile u hela lacagtoo.
Waxan arkaynaa Ciidankii amisom oo islaamaha dariiqa ku jiidhay oo edaab loo yeelay.
Waxaan arkaynaa dawladii somaliyeed oo la aaminayo,halka wixii hore Hay-yadaha Gaalada wax loogu dhiibi jiray,dawladani iyada aya lacagta loo dhibaa,oo la aaminay.
Wax qabadkii miyaa xanuun kugu noqday.
Hadii hal talaabo hore loo qaado,waxan arkayaa adoo barooranaya oo le Formaajo ayaa 2 sano in loogu daro dalbadaykkk
Markaan arkay oohinta kaa socota,waxaa muuqda dulacda oohintaada.
Maxada adeerkay Tuug uga shaqo fiican
Maxaad Guryihii aanu duminay dib ugu dhisay?
Maxaad dawladnimodii aanu duminay,u soo celinaysaa?
Maxaad magaaladii qashinku buuxay nooga xaadhay?
Maxaad qaraxyadii lagu dhimanjiray meel u saartay?
Maxaaad alshabaab uga xoog roonaatay?
Guulahani uu gaadhay Maamulkan uu Formaajo hogaaminayaa,waxa noqdeen guuldarada Adeeradada Tuugta ah ee aad jeceshay.
Guusha Geesigu waa guuldara Nacaska ama qofka cadwga ah.
Maahmaah carabi ah ayaa tidhaa:â€�Hadii uu qofkastabaa yahay Nijaar,Dooxaba Geedo kuma hadheenâ€�.
Dawladnimo ma wadi karo ninkii dumiyay,
waxaa dawladnimo wada kara/dhisyaqaana ninkii laga dumiyay.
Cilmigani ma beenin kartid.
30 sano ee mooryaanka ahayd wixii aad dumisay ayaa la disayaa.
Eebow was ku salaamay waar ninyow dad loo jawaabin baa jira kan mr bahal la baxay isagoo lahayste ah ayuu rabaa inuu buraashkii farmaajo ku xaaray sanka kaa mariyo adeerow u sheeg 30 hadanu duminay 30 ku xaarnay xorbaanu u nahay dhulkayagee waydii boorame isaaq ma ku xoreeyeen kaboshaaqle iga dheh